"Afkaaga Xidho Oo Isku Day....." - Paul Pogba Oo Loo Sheegay Inuu Aamuso Kaddib Markii Uu Dareenkiisa Real Madrid Qirtay - Gool24.Net
“Afkaaga Xidho Oo Isku Day…..” – Paul Pogba Oo Loo Sheegay Inuu Aamuso Kaddib Markii Uu Dareenkiisa Real Madrid Qirtay
Khabiirka kubadda cagta ee Jan-Aage Fjortoft ayaa toos u tilmaansaday khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Paul Pogba kaas oo dhawaan banaanka keenay rabitaankiisa ah inuu u ciyaaro kooxda ree Spain ee Real Madrid.
Paul Pogba ayaa markale indhaha caalamka xaday iyadoo ay saxaafada kubadda cagtu aad u hadal hayso maadaama oo uu shiday dab-kale oo mustaqbalkiisa iyo ka bixitaankiisa Old Trafford la xidhiidha.
Pogba oo saxaafada wajahay kaddib guushii 7-1 ka ahayd ee uu France ka gaadhay dhigiisa Ukraine ayaa sheegay inuu jecel yahay kooxdiisa Man United balse ay riyada ciyaaryahan kasta tahay inuu ka ciyaaro Real Madrid.
Pogba ayaa wakhtigaas yidhi “Maxaan idiin sheegi karaa? Hubaashii, dhamaan ciyaartoydu way jecel yihiin inay u ciyaaraan Real Madrid. Hubaashiina riyo ayay tahay. Aniga ayay riyo ii tahay”
“maxay tahay sababta aanan ugu biirayn maalin maalmaha ka mid ah? Sida aan horeba u sheegay, waxa aan hadda joogaa Manchester United oo ah koox aan jecelahay. Iyada ayaan wax walba u hurayaa hadda, naftayduna halkan ayay ku faraxsan tahay iyo inaan kusoo celiyo halkii kooxdani u qalmaysay.”
Jan-Aage Fjortoft oo farriin u diraya Pogba ayaa isna sheegay inay tahay wakhtigii uu afkiisa xidhan lahaa oo uu garoonka dhexdiisa shaqo cad uga qaban lahaa kooxdiisa.
“Waa wakhtigii uu isagu afkiisa xidhan lahaa ee uu isku dayi lahaa inuu garoonka wax ka dhex qabto” ayuu Jan-Aage Fjortoft u sheegay ESPN.